अब डिजिटल वालेटबाट दैनिक रु १०,००० सम्म मात्र कारोबार गर्न सकिने – नयाँ प्रहर
अब डिजिटल वालेटबाट दैनिक रु १०,००० सम्म मात्र कारोबार गर्न सकिने
नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल वालेटबाट गरिने कारोबारमा कडाई गर्दै दैनिक रु. १०,००० र एक पटकमा रु. ५,००० सम्मको मात्र कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। यति मात्र होइन, अब मासिक रु. २५,००० बराबरको मात्र कारोबार गर्न सकिने गरि नियमन गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले डिजिटल वालेटहरुले सर्वसाधारण पैसालाई अर्को क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने संभावनाले गर्दा यस्तो नियम बनाएको बताएको छ। डिजिटल वालेट बैंक होइनन्, त्यसैले उनीहरुले सर्वसाधारणको पैसा संकलन गरेर अन्य क्षेत्रमा परिचालन गर्न नपाउन् भनेर यस्तो नियम लगाइएको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले बताए।
यस किसिमको व्यवस्थाले इसेवा, खल्ती लगायत डिजिटल वालेट कम्पनीहरुलाई निक्कै असर पर्ने देखिएको छ। आम सर्वसाधारणले पनि यस किसिमको कडाइको विरोध गरिरहेका छन्।
‘राष्ट्र बैंकले डिजिटल कारोबारलाई बढावा दिनु पर्नेमा यस किसिमको नियम लगाएर झन् दु:ख दिने काम गरेको छ। अब घरमा नै बसेर प्लेन टिकट लिने जस्ता सुविधा लिन नमिल्ने भयो।’ सामाजिक संजालमा यस्तै प्रतिक्रिया देखिंदै छन्।
इसेवाले प्लेन टिकट मात्र होइन, रेमिट्यान्स सुविधा समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ। इसेवाबाट आफ्नो वालेटमा भएको पैसा नेटवर्कमा रहेका कुनै पनि बैंकको एकाउण्टमा पठाउन सकिने सुविधा समेत रहेको थियो। इन्टर-बैंकिंग कारोबारको लागि आम सर्वसाधारणहरुले इसेवालाई सहज महसुस गरिरहेका थिए। एक्कासी आएको यस्तो व्यवस्थाले आम सर्वसाधारणमा निराषा छाएको छ।
राष्ट्र बैंकले आवश्यकता अनुसार यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न सकिने बताएको त छ, तर कहिले सम्ममा परिवर्तन हुन्छ भन्ने निश्चित छैन।
← चीनलाई प्रम ओलीले २ दुई जोडी गैंडा उपहार दिने, समातेको हेर्न चिनियाँ विज्ञ नेपालमा
विवेकशील साझाको भारतका सद्भाव समुहहरुले नयाँ वर्षको शुभकामना कार्यक्रम गर्ने →